होमपेज / शुक्रबार / हलिउड सपनाका पछिपछि
हलिउड सपनाका पछिपछि	10 Aug 2013 २६ श्रावण, २०७०
नेपालमा सफल कलाकारका लागि बलिउड सपनाको अर्को केन्द्रबिन्दु हो। हलिउडको सपना भने नेपाली कलाकारले त्यति देख्दैनन्। तर, भर्खरै १५ वर्ष टेकेकी आश्मा गिरीको सपना, लक्ष्य र भविष्य जे भने पनि हलिउड हो। नेपालमा जन्मेहुर्केर हाल क्यालिफोर्नियामा रहँदै आएकी उनी यतिबेला त्यही हलिउड सपनाका पछिपछि कुदिरहेकी छिन्। क्यालिफोर्नियामा रहेको बार्बिजोन मोडलिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा छ महिना ट्रेनिङ लिएपछि उनले मोडल ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टको अडिसन पास गरिन्। यतिबेला त्यही संस्थासँग आबद्ध उनले अभिनय कक्षा पनि लिइरहेको बताइन्। बर्खे छुट्टीमा जन्मथलो आएकी उनले नेपालका केही फोटोग्राफरबाट तस्बिर पनि खिचाएकी छिन्। Tweet Leaveacomment Message *
सातो लाने स्पिडसडकमा कानको जाली फुटाउला जस्तो चर्काे आवाज निकालेर तुफानी गतिमा हुइँकिरहेका हुन्छन् केही मोटरसाइकल । साइलेन्सर पाइप प्वाल पारिएका, अग्लो बनाइएका र रूपै फेरिएका बाइकहरू भेटिन्छन् । तिनले अरू सवारी...	विपिका भइन् लिटिल च्याम्पतेस्रो शिवम सिमेन्ट लिटिल च्याम्प–२०१४ को उपाधि विपिका कायस्थले जितेकी छन्। शनिवार पोखरा सभागृहमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा प्रतिभा माविमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत कायस्थले उपाधि जितेकी हुन्। 'राजधानी त पैसा हुनेको हो'सबुरे थारुले जिन्दगीको ७४ वसन्त पार गर्दासम्म नेपालको राजधानी देखेका थिएनन्। गाउँमा धेरैले उनीसँग काठमाडौँको बखान गर्ने गर्थे। 'पशुपतिनाथ र धरहराको चर्चा धेरै हुने गर्थ्यो,' सोमवार हातमा निलो झोला बोकेर...	रुचाइयो 'झोले'को गीतफिल्म निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल दर्शकलाई नयाँ स्वाद चखाउन चाहन्छन्। फिल्म 'धर्मा'मा मनीषा कोइरालालाई अभिनय गराएर, 'चपली हाइट'मा यौन र अपराधको विषयलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेरमात्रै होइन, नेपालमै पहिलो पटक...	सेक्सका लागि प्रेमको नाटक गर्छन्तपाइँको विचारमा सेक्स के हो?
सेक्स प्रकृतिको बरदान हो। मानवीय जीवनको आवश्यकता हो।	आफ्नै ‘स्टाइल'मा तीजसाउन महिनादेखि नै हातभरि रंगीचंगी चुरा लगाएकी उषा पौडेल तीजको माहोल मज्जैले जमाउने धुनमा छिन्। साथीसंगी भेला भई पशुपतिनाथ मन्दिर जाने योजना छ उनको। शिवजीको पूजा गरेपछि उतै नाचगान गर्ने...	फिफा वेबसाइटमा नेपाली स्ट्राइकरनेपाली फुटबलका उदाउँदा स्ट्राइकर विमल घर्तीमगरले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै आएका छन्। १६ वर्षमै कीर्तिमान थप्दै अगाडि बढिरहेको विमलको अर्को सफलता फिफाको वेबसाइटमा उपस्थिति जनाउनु हो।	वाइनले दिने सौन्दर्यचकलेट फेसियल, फ्रुट फेसियलबारे हामीले धेरै सुनेका र देखेका छौँ। अहिले वाइन फेसियल सौन्दर्य संसारमा चर्चाको विषय भएको छ। वाइनको प्रयोगले गरिने फेसियललाई वाइन फेसियल भनिन्छ। यसमा रेड, ह्वाइट या...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...